पहिलो पटक रंगेलीलाई एमालेको ‘लाल किल्ला’ बनाउने ‘पर्दा पछाडीका हिरो’ को हुन् ? - Purbi Times
गृहपृष्ठ » पहिलो पटक रंगेलीलाई एमालेको ‘लाल किल्ला’ बनाउने ‘पर्दा पछाडीका हिरो’ को हुन् ?
मेयर, उपमेयरसहित ९ वटै वडामा एमाले विजयी
विराटनगर, १० जेठ । नेपाली कांग्रेसको गढको रुपमा चिनिएको दक्षिपूर्वी मोरङको रंगेलीमा पहिलो पटक नेकपा (एमाले) ले इतिहास रचेको छ । पहिलो पटक स्थानीयतहको निर्वाचनमा मेयर, उपमेयरसहित सवै वडा जितेर एमालेले नयाँ इतिहाँस रचेको हो ।
तत्कालिन सदभावना, कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्रले विभिन्न निर्वाचनमा रंगेलीमा जित्दै आएको भएपनि पहिलो पटक एमालेले मेयर, उपमेयरसहित ९ वटै वडा जितेर नगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेको हो ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा रंगेली नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र ९ वटै वडाको वडाध्यक्ष एमालेले जितेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रंगेलीले सार्बजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार एमालेका दिपिल बगडीया फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका छन् ।
बगडीयाले १२ हजार ८ सय ६१ मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका मोदराज घिमिरेले ९०६१ मत प्राप्त गरे । बगडीया र घिमिरेको मतान्तर ३८०० छ । बगडीया निवर्तमान मेयरसमेत हुन् ।
त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकै भूमा पराजुली ११ हजार ७ सय ९० मतसहित निर्वाचित भइन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार जसपाका पन्नालाल मण्डलले ५१७५ मत मात्र प्राप्त गरे । पराजुलीले मण्डललाई ६६१५ मतान्तरले पराजित गरिन् ।
रंगेलीका ९ ववडा मध्ये सवै वडामा पनि एमाले विजयी भयो । ६ नम्बर वडाको एउटा वडा सदस्य जसपाले जितेपनि अन्य सवै वडमा एमालेका उम्मेदवार प्यानलसहित निर्वाचित भएका हुन् ।
रंगेली कुनै बेला तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालको निर्वाचन क्षेत्र हो । उनी सोही क्षेत्रबाट पटक–पटक निर्वाचित भएर मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । तर, रंगेलीलाई जहिल्यै उपेक्षा गरेको स्थानीयले अहिलेसम्म गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कुनै समय एकछत्र पकड जमाएको कांग्रेस पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने रंगेलीमा निरिह देखिएको छ । लामो विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एउटा सदस्यसमेत जित्न सकेन । बरु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ६ नम्बर वडाको एउटा सदस्य जितेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ ।
पार्टी विभाजन भएपनि सांगठनिक रुपमा अझ बलियो देखिएकै कारण मोरङका कतिपय पालिकामा चुनावी तालमेल नगरेपनि रंगेलीमा सत्ता गठबन्धनले जसरी पनि एमालेलाई पराजित गर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलहरु एकजुट बनेका थिए । तर, उनीहरु सफल भएनन् । बरु उल्टै लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्यो ।
एमालेले रंगेलीमा पहिलो पटक पाएको ऐतिहाँसिक सफलताको पछि दोस्रो पटक निर्वाचित मेयर बगडीया, एमालेका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, जनसंगठन सवैको उत्तिकै योगदान छ । तर, एमालेलाई रंगेलीमा ऐतिहाँसिक जित दिलाउनेको अग्र पंत्तिमा आउँछन् प्रदेश कमिटी सदस्य मनोज अग्रवाल ।
अग्रवालले गरेको कुशल नेतृत्व, संगठन सुदृढीकरण, टिकट वितरणको उचित व्यवस्थापन, असन्तुष्टलाई समेत समेटेर एकतावद्ध बनाएका कारण एमालेले ऐतिहाँसिक सफलता पाएको स्थानीय कार्यकर्ता बताउँछन् ।
उनी यसपटकको निर्वाचनमा रंगेलीको निर्वाचन परिचालन समितिका कमाण्डरनै भएर खटिएका थिए । कार्यकर्ता माझ निकै लोकप्रीय मानोज अग्रवाल कुशल संगठककारुपमा पनि परिचित छन् । अग्रवालले पार्टीबाट प्राप्त जिम्मेवारी विवादरहितरुपमा कुशल ढंगबाट निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी पार्टीले दिने कुनैपनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने युवा नेता मात्र होइनन् । आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा गरेरै छाड्ने उनको स्वभाव छ । अग्रवाल जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि अवसरको रुपमा बदल्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । उनी भर्खरै सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा अहोरात्र खटिएका थिए ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा विपक्षी दलहरुको चौतर्फी घरेवन्दीका बाबजुद पनि पार्टी काममा निरन्तर खटिएका उनीमाथि पटक–पटक आक्रमणको प्रयाससमेत भएको थियो । तर पनि उनी हिम्मत नहारी कार्यकर्ता संगसँगै चुनावी अभियानमा होमिए । फलस्वरुप अग्रवालसहितका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताको अथक मेहनेत र लगावका कारण पार्टी विभाजनले थिलथिलो भएको अवस्थामा पनि निर्वाचनमा एमालेले रंगेलीलाई आफ्नो किल्ला बनाउन सफल भएको छ ।
त्यसो त, यसपटकको निर्वाचनमा अग्रवाल एमालेबाट रंगेलीको मेयरका लागि बलियो दाबेदार थिए । तर, उनले एमालेलाई बलियो बनाउन र पार्टीलाई ऐतिहाँसिक जित दिलाउने भन्दै त्यागसमेत गरे । सोही कारण एमालेलाई सफलता दिलाएर अग्रवाल आज ‘म्यान अफ दी इलेक्सन’ बनेका छन् ।
चाहे पार्टीको विभाजन होस, मधेश आन्दोलन होस वा विपक्षीको चौतर्फी घेराबन्दी, उनी रंगेलीमा एमालेलाई जोगाउन शतिशाल झैँ उभिँदै आएका छन् । रंगेलीमा अग्रवाल एमालेको ‘संकट मोचन’ गर्ने नेताकारुपमा समेत परिचित छन् ।
को हुन् मनोज अग्रवाल ?
युवा नेता मनोज अग्रवाल विद्यार्थीकालदेखि आधारभूत तहदेखिनै ग्रामिण क्षेत्रबाट पार्टी र संगठनमा विभिन्न तहको सफलता पूर्वक नेतृत्व गरेर नेकपा (एमाले) को प्रदेश कमिटी सदस्यसम्म बन्न सफल भएका हुन् ।
अग्रवाल २०४६ सालदेखि निरन्तर रुपमा पार्टीका विभिन्न कमिटीको कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै, वडा, गाउँ, जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीसम्म पुगेका मारवाडी समुदायका युवा नेता हुन् ।
सानै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेका अग्रवाल नेताहरु माझ ‘बाल कमरेड’ का रुपमा परिचित थिए । तत्कालिन समयमा कम्युनिष्टको न्युन पकड रहेको रंगेलीका उनै अग्रवाललाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध निर्वाचन लडेका कम्युनिष्टका पुराना नेता लव प्रधानले ‘बाल कमरेड’ भनेर बोलाउने गरेको उनि सम्झन्छन् ।
त्यस्तै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकै कारण तत्कालिन समयमा छरछिमेक र गाउँलेहरुले आफुलाई ‘माले भाई’ भनेर बोलाउने गरेको अग्रवालले बताए । ‘मलाई कमरेड लवप्रधानले सानै भएकाले बाल कमरेड भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो ।’ सम्झिँदै उनले भने,‘गाउँले र छर छिमेकले त मालेभाई भनेर नामनै राखिदिए ।’
तत्कालिन रंगेली गाविसबाट नगरपालिका बनेपछि अग्रवाल एमाले रंगेली नगर समन्वय कमिटीको संयोजक समेत भए । तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) बिच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अग्रवाल पार्टीको रंगेली सह–इन्चार्ज बने । सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि उनले नेकपा (एमाले) रंगेली नगर कमिटी इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाले ।
दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपनि अग्रवालकै नेतृत्वमा रंगेलीमा पार्टी एक ढिक्का रह्यो । अर्थात माओवादी पृष्ठभूमिका अधिकांश स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा फर्किएनन् । सो बेला तत्कालिन माओवादी खेमाका ८० प्रतिशत बढी नेता कार्यकर्ता पार्टी एकताको निरन्तरताकै रुपमा एमालेमै बसे । त्यसमा मनोज अग्रवालको विषेश भूमिका रहेको स्थानीय नेता हरिप्रसाद मण्डल बताउँछन् ।
अग्रवालसहित रंगेलीका सवै नेता कार्यकर्ताको अग्रसरतामा पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालिन नेकपाकै निरन्तरताको रुपमा एमालेमा एकतावद्ध गर्न सफल भएको मण्डल सम्झन्छन् ।
एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल–खनाल पक्षको विवादका कारण अन्ततः विभाजित भयो । माधव नेपालले एमालेबाट अलग हुँदै अलग्गै पार्टी खोले । तर, अग्रवालको कुशल नेतृत्वका कारण सो विभाजनको असर पनि रंगेलीमा पर्न सकेन ।
अग्रवालको कुशल नेतृत्व र विभाजनमा लाग्न नचाहने आम नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीलाई रंगेलीमा एक ढिक्का बनाइ राख्न सफल भए । रंगेली क्षेत्रका जनता र आम कार्यकर्ता माझ भिजेका उनै अग्रवाललाई पार्टीले प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।
अग्रवाल नेकपा (एमाले) को १० औँ महाधिवेशनमा मोरङ क्षेत्र नं. ५ बाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएर सहभाागिता जनाए । स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चाहना बमोजिम आफु महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएको उनी सम्झन्छन् ।
उसो त हरेक निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनमत सृजना गर्न उनले ठुलै कसरत गर्दै आएका छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमालेको पक्षमा मारवाडी समुदायबाट जनमत सृजना गर्न अग्रवालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
यसपटकको निर्वाचनमा पनि उनले एमालेका लागि मारवाडी समुदायको मत प्राप्त गरि विराटनगरमा एमालेलाई जिताएर पहिलो दल बनाउन ठुलो भूमिका खेलेका छन् । उनले पाँच सय भन्दा बढी विराटनगरका मारवाडी समुदायका अगुवाहरुलाई एमालेमा प्रवेश गराई बामपन्थी मारवाडी युवा संगठन मोरङ जिल्ला कमिटी गठन गरि निर्वाचनमा परिचालन गराएका थिए ।
गत संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेलाई मारवाडी समुदायको मत दिलाउन अग्रवालकै अगुवाईमा वामपन्थी मारवाडी युवा समुहको व्यानरमा घर–घर पुगेर मत मागिएको थियो । जसका कारण एमालेले विराटनगरमा मारवाडी समुदायको अधिकांश मत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । उनी हाल एमाले निकट बामपन्थी मारवाडी युवा संगठनका राष्ट्रिय संयोजकसमेत हुन् ।
उनै अग्रवालको व्यक्तित्व, संगठनप्रतीको लगाव, संगठन निर्माणमा खेलेको भूमीका, सामाजिक कार्यमा गरेको योगदान तथा अग्रवालसहित स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले अहोरात्र खटिएको परिणामस्वरुप रंगेलीमा एमालेले ऐतिहाँसिक सफलता पाएको छ । त्यसैले एमाले नेतृत्वको रंगेली नगरपालिकाका सवै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताले अनुभूती गर्ने खालका राम्रा कामहरु गरेर जनताको मत जित्न जरुरी रहेको स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।